Caldera de Taburiente | भ्रमण गर्नुहोस् यात्रा समाचार
को क्यानरी टापुहरू तिनीहरू स्प्यानिश टापुहरूको समूह हो जुन एट्लान्टिकमा छ र यसले यस देशलाई धेरै स्वायत्त क्षेत्रहरू बनाउँछ। त्यहाँ जम्मा सात मुख्य टापु छन् र तिनीहरू उत्तर अफ्रिकामा अवस्थित छन्, मोरक्कोको नजीकमा र यूरोपियन महाद्वीपबाट 900 ०० किलोमिटर टाढा।
यहाँ टापु ला पाल्मा त्यहाँ छ Caldera de Taburiente राष्ट्रीय पार्क। यो यसको लागि एक सुन्दर र संरक्षित क्षेत्र हो जैविक महत्त्वत्यसोभए यदि तपाइँ प्रकृति धेरै मन पराउनुहुन्छ र तपाइँ यस गर्मीमा टापुहरूमा जाने योजना बनाउनुहुन्छ भने, तपाइँले यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ हामी तपाइँलाई जानकारी दिन्छौं।
2 Caldera de Taburiente राष्ट्रीय पार्क मा हेर्नुहोस्
यो टापु La Palma को बीचो बीचमा छलगभग 709० thousand हजार वर्ग किलोमिटर सतह र more० हजार भन्दा बढी बासिन्दाहरू भएको टापु। यसको राजधानी सान्ता क्रुज डे ला पाल्मा हो र १ 80 बर्षदेखि सम्पूर्ण टापु बायोस्फीयर रिजर्भ भएको छ युनेस्कोका अनुसार।
Caldera de Taburiente राष्ट्रीय पार्क समावेशको लागि प्रसिद्ध छ संसारको सबैभन्दा ठूलो ज्वालामुखी क्रेटर। हो, तपाईं सहि पढ्नुहुन्छ। यो विशाल छ। यो अवसाद 600०० र meters०० मिटर बीचको उचाईमा अवस्थित छ यो व्यास आठ किलोमिटर छ र एक र आधा गहिरो सम्म, तर क्रेटरको वरिपरि क्रिष्ट यसको उच्च पोइन्टमा २ 2400०० मिटर भन्दा बढी छ। हेर्न लायकको केही।
यो विशाल क्रेटरको उत्पत्ति, तपाईले सोच्न सक्ने जस्तो होइन, डरलाग्दो पाइरोप्लास्टिक विस्फोटको उत्पादन हो। मनपर्दैन, यस प्रकारका क्रेटरहरूको उत्पत्ति हुने विस्फोटहरू भने शान्त छन्s र लाभा बारम्बार देखा पर्दछ, ज्वालामुखी उचाई भन्दा बढी सतहमा विस्तार गर्दै। क्रेटरको ड्रप र शंकुको आकार बढ्दै जान्छ र ज्वालामुखीले बाहिर निस्केको सामग्रीलाई लाभाले चिसो पार्दा उनीहरूले यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्छन् जसमा कि त सबै विस्फोट हुन्छ वा लाभा एक अन्तरमा फैलिन्छ।
ट्याबरीएन्टेको साथ यस्तो भएको जस्तो देखिन्छ, जसमा लाभा लगभग २० लाख वर्ष अघि माथिल्लो किनारबाट सरेर समाप्त भयो। भूगर्भविज्ञानीहरूले यो व्याख्या गरेका छन् जसले वर्षौं उपग्रह छविहरू र इलाकामा अध्ययन गरेको छ, जसमा पानी पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो ला पाल्मा हो यो धेरै धाराहरु, नदीहरु, झरनाहरु र धारा संग एक टापु होs यस्तो संयोजनको साथ परिदृश्य, साँच्चै सुन्दर छ।
त्यसकारण, पार्क अवलोकन गर्दा तपाईले सबै चीज देख्नुहुनेछ: झरना, नदी, झरना र झरनाहरू। सामान्यतया पानी सफा हुन्छ तर त्यहाँ भू-भागको भौगोलिक विशेषताहरूको कारण गाढा पानी हुन सक्छ। पानी ठीक त्यहाँ बनाउँछ धेरै वनस्पति त्यसैले क्रेटर हो कि द्वारा शानदार क्राफ्ट द्वारा कभर गरिएको छ पाइन वनउदाहरणका लागि क्यानेरियन पाइन प्रजातिहरूको जुन आगोसँग राम्रोसँग प्रतिरोध गर्दछ। त्यहाँ पनि छ रक्रोज, बिच, लौरेल्स, विलो, फर्न, साग, देवदाराहरू.
Caldera de Taburiente राष्ट्रीय पार्क मा हेर्नुहोस्
क्यानरी टापुमा सबै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू मध्ये, कुल चार, तथ्यांक अनुसार यो सबैभन्दा कम भ्रमण गरिएको पार्क हो। तर यी फोटोहरू हेरेपछि, के तपाईं त्यहाँ पर्खनुभयो? तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ रात ताराहरू मा हेर्न हिंड्न, तपाइँ गर्न सक्नुहुन्छ ट्रेकिंग सबै टापु मा वा झरना र नदीहरूमा नुहाउनुहोस्। त्यहाँ बाहिर के गर्न सबै छ।
La रंगहरूको क्यासकेड, ब्यारानको डे लास एंगुस्टियसमा अवस्थित, बहुरंगी र टुरिस्ट म्याग्नेट हो। यो एक अर्ध प्राकृतिक झरना हो जुन यस खोलामा अलि बढी लुकाइएको छ र छ मिटर अग्लो पर्खालमा खसेको छ जुन फलाम, शैवाल र मसले उत्पादन गरेको पहेंलो, सुन्तला र हरियो टोनमा चम्किन्छ। त्यहाँ एक उत्तम समुद्र तट, को पनि छ ताबुरिएन्ट बीचe, कि एक समुद्र तट हो पार्क को भित्र किनार देखि टाढा छ, जबकि।
यो Taburiente धारा को एक सानो समुद्र तट हो धेरै चट्टानहरु को लागी बाट बाट गर्न सकिन्छ, लस ब्रेसिटोस, बाट क्याम्पिंग क्षेत्र। यो पाइनहरू बीच दुई घण्टा हिंड्न छ तर यो लायक छ। शिविर बोल्नु भनेको हो केवल पार्क तपाईं पार्क मा रहन सक्नुहुन्छ। यो नि: शुल्क हो तर तपाईंले पहिले बुक गर्नु पर्छ। यो साढे पाँच किलोमिटरको बाटोबाट पुग्छ र त्यहाँ काठका टेबुलहरू, शौचालयहरू, वर्षा र पानी बग्ने पानी छन्।
पार्क पैदल यात्राको लागि उत्तम स्थान हो र सत्य यो हो कि यहाँ तपाईं मात्र हिंड्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण एक हो धेरै राम्रो साइनेजको साथ सडकहरूको नेटवर्क. तपाईं बाटोमा पार्क प्रविष्ट गर्नुहोस् ब्रेसीटोस, लस Llanos de Ariadne को शहर बाट एक घण्टा वा ला Cumbrecita दृष्टिकोण बाट लगभग १ 15 मिनेट ड्राइभको बारेमा El Paso दर्शक केन्द्रको लागि।
यस नेटवर्कको लामो मार्ग छ जुन टाबुरिएन्टे क्याल्डेराको सीमाना छ र टापुको शीर्षमा पुगेको छ र बगैंचाको अर्को सानो समूह जुन खोलाहरू हुँदै जान्छ। तपाईंले शिविर क्षेत्र भित्र पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ किनकि त्यहाँ सुरक्षा व्यक्तिहरू छन् वा त्यहाँ पनि एल पासो भिजिटर सेन्टरमा। यदि तपाईं खगोल विज्ञान मनपराउँनुहुन्छ, पार्क पनि आकाश मा चिन्तित एक असाधारण स्थान हो किनभने यो भित्र छ Roque de लॉस Muchachos खगोल भौतिक वेधशाला।
युनेस्कोले विचार गर्ने २,10०० मिटरको उचाईमा दिन र रातको निरीक्षणका लागि १० भन्दा बढी उपकरणहरू खगोल विज्ञान विरासत। तपाई यसको आन्तरिक मार्गनिर्देशित भ्रमणका लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। यो टापुको राजधानीबाट टाढा छैन, एक घण्टा बीस कारले र यो यसको लागि लायक छ किनकि यहाँ छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो अप्टिकल टेलिस्कोपवा, Grantecan भनिन्छ।
अन्तमा, एक व्यावहारिक सारांश:
बायलर तीन तरीकाले प्रविष्ट गरिएको छ र ती सबैमा तपाईं हिंड्नु पर्छ। ब्रेसिटोस यो सब भन्दा साधारण प्रविष्टि हो र minutes 45 मिनेट लिन्छ, त्यहाँ पनि छ Barranco डे लास Angustias, जुन प्राय प्रवेश द्वार भन्दा बाहिर निस्कन्छ, यो पहिले कार र त्यसपछि हिड्न र बाट गर्न सकिन्छ Cumbrecita ट्रेल यो अन्तिम सम्भव प्रविष्टि हो तर यो गाह्रो भएकोले यो कम से कम लगातार हुन्छ।
पूर्ण मजा लिन यो रात बस्न सल्लाह छ र तपाईं यो पालको साथ मात्र गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले प्रक्रिया गर्नु पर्छaशिविर अनुमति एल पासो भिजिटर सेन्टरमा वा क्याबिल्डो इन्सुलर डे ला पाल्माको वातावरणीय एकाईको कार्यालयमा। कम्तिमा एक हप्ता अघि गणना गर्नुहोस्। यो सित्तैमा हो।
पार्क भित्र तीनवटा छन् सूचना बुथ नक्शा, सुझाव, र अधिक मा स्टक गर्न।
सिफारिस गरिएको छ पार्क भित्र तीन मार्गहरू: लास चोजास, लस एन्डिनेस र ला डेसफोन्डा
जाँच गर्नुहोस् मौसम स्थिति जानु अघि
चिसो, सूर्य र सम्भावित पहिरोबाट आफूलाई जोगाउनुहोस्
कृपया उपयुक्त लुगा र जुत्ता लगाउनुहोस्, साथसाथै खाना र पेय पदार्थ पनि लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » Caldera de Taburiente भ्रमण गर्नुहोस्